Sheekh Shariif oo ka digay qorshe ay damacsan tahay Villa Somalia
May 26, 2020 Mahad Jama 5
MUQDISHO(P-TIMES)- Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka digay isku day walba oo lagu kordhinayo muddo xileedka hay’addaha dastuuriga dalka, kadib markii maalintii shalay ahayd labada aqal ee Baarlamaanka dalka Soomaliya ay dib u dhigeen kulan ay kaga hadli lahaayeen doorashada dalka.
Shariif Sheekh ayaa ku eedeeyay gudoonka Baarlamaanka in uu ku xad gudbay dastuurka KMG iyo sharciga doorashooyinka, talaabadii muddo bil dib loogu dhigay hor imaanshihii Baarlamaanka ee guddiga doorashooyinka qaran.
“Waxaan ka digaynaa isku day walba oo dib loogu dhigayo doorashada qaranka iyo kordhinta muddo xileedka hay’addaha dastuuriga ah iyo madaxda qaranka” ayuu yiri Sheekh Shariif.
Waxaa uu intaas kusii daray “Wixii ka dhasha isku daygaas waxaa masuuliyadeeda dusha u ridan doona madaxda dowladda”
Ugu dambayn Sheekh Shariif ayaa sheegay in dowladdu ay ku fashilantay waajibaadkii loo doortay, waxaana uu yiri isagoo arimahaas ka hadlay sidatan “Dowladdan waxay ku fashilantay waajibaadkii loo doortay oo ay ugu horreysay qabashada doorasho qof iyo cod ah kuna dhacda si xor ah oo xalaal ah”.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa soo baxayey in dowladdu ay wado qorshe ay ku samaysanayso muddo kordhin maadaama haatan dalka aysan ka suurta galayn doorasho qof iyo cod ah oo hore u balan qaaday dowladdu in ay ka hirgalinayso gudaha dalka.
Shiikh shariif wuxuu ilowsanyahay in muddo xilledkiisii sanad loo kordhiyay waliba shuruud looga dhigay inuu eryo Raysalwasaaraha (Faramajo) shirkaasoo ka dhacay lampala oo uu shir gudoominayey Musaveni. Mida labaad Hassan sheekh wuxuu kororsaday lix bilood (6 months) si uu doorasho dadban u soo diyaariyo.
Marka waxaa laydiinka rabaa inaad dulqaad yeelataan sidii la idiinku dulqaatay idinkoo mahadsan.
Inkasta oo aanan wax khayr ah ku ogeyn ninkan afka cas iyo Culusoowga hoos kaga naban,
hadana ninkii wax ku qaban waayey 4 sano oo loo doortay in uu wax horay u wado, oo weli meeshii uu ka qaaday taagan, ma mudna in xitaa Saacad loogu daro!
Salaan gobeed Ugaas oo waan dhowahay shukran jaziilan. Bog hore ayaan haddeer ku soo arkay markhaatiga aad ii noqotay oo Alle waxaan kaaga baryayaa in uu kheyr aan caddad iyo qiyaas lahayn kaa sawaabiyo.
Ina adeer hadda ayaan arkay difaacii gacaltooyo ee aad boggii hore iigu gashay iyo ducadaadii qiimaha badnayd ee aad ii raacisay. Waa runtaa oo beladan Eebbe sharkooda ha inaga wada hayo afkoodii baa nagu batay ee. Aamiin.
Suldaan adaa mudan, waana kaa qaaday salaanta.
Suldaan waan ogaa in aay dad badan kugu qaldi doonaan mid magacaada isticmaalay oo aad ugu dabbaal degay, isku dhaca Fani iyo Karaash.
Kaas oo muujiyey in uu aad ugu faraxsan yahay burburka puntland iyo meesha lagu kala tago. Qiyaasteeyda wuxuu ahaa nacab fog oo aay yartahay in uu sidaa u fekero qof Daarood ah.
Ninkaa waan u jawaabay, runtiina waan gartay in uu yahay isku dire reer Puntland kala dilaya. Laakiin dad badan ayaa ku sirmay oo adiga oo xagal 360 digrii ah jaray kuu qaatay. Waana dantuu awalba ka lahaa. Waan ku salaamay.